Ihe omimi: Web Scraping Software - Top Atụmatụ
Data gosipụtara site na ọtụtụ ibe weebụ na weebụsaịtị nwere ike ịnweta naanị site na iji ihe nchọgharị. Imirikiti saịtị enweghi ike inye ọrụ na ebe ị nwere ike ịchekwa lekwasịrị anya gị na igwe gị. Nanị nhọrọ ị nwere iji nakọta data bụ kaadị-kọwapụta data ị na-eleta anya, nke bụ ọrụ na-agwụ ike ma na-ewe oge - melhor revenda de hospedagem.
Ọ bụ ya mere ị ga - eji nchịkọta weebụ iji mezue ọrụ gị. Nchịkọta weebụ, nke a makwaara dịka owuwe ihe ubi weebụ, bụ ụzọ isi wepụ ihe ederede site na iji ngwanrọ weebụ. Ngwá ọrụ nchịkọta weebụ weghachite data site na ibe weebụ na weebụsaịtị ebe a na-echekwa ozi achọtara na nchịkọta okpokoro ma ọ bụ na igwe gị.
Gịnị Mere Ogbenye?
Nchịkọta ihe ntanetị weebụ na-enyere ndị mbido aka wepu ozi sitere na weebụ yana na saịtị dị ike. Octoparse na-enye ntụziaka na otu ị ga-esi jiri ngwa weebụ scraping iji kpochapụ weebụsaịtị na ibe weebụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-ahazi ngwanrọ weebụ scraping iji rụọ ọrụ na saịtị ma ọ bụ ahaziri maka ihe nchọgharị.
Site na Octoparse, ị nwere ike wepụ data bara uru n'igwe ojii ma ọ bụ jiri igwe mpaghara. Otú ọ dị, ịchọta n'ígwé ojii na-akwado ndị ọrụ mpaghara. Ngwunye ngwanrọ na nkwado ndabere omenala bụ ihe dị mkpa ị ga-atụle mgbe ịpịpị data.
Octoparse na-enye ohere scrapers web iji wepụ data na ụzọ atọ nke gụnyere:
nyere n'efu na weebụ. Ịnwere ike iji usoro ọkachamara nke software wee kpochapụ ibe weebụ, URLs, ma depụta ibe weebụ.
Ọnọdụ di elu
Nke a bụ usoro kachasị mma nke ntanetị weebụ. Ụzọ dị elu nke nbudata data dabeere na URLs, ndepụta ederede, ndepụta dịgasị iche, na ndepụta ndozi. A pụrụ iji ọnọdụ ahụ wepụ ma ibe ma ọtụtụ ibe weebụ.
Site na Octoparse, ị nweta data gị n'ime ihe nke sekọnd. Ọ bụrụ na ị na-elele nkuzi ntanetị weebụ, ị ga-ahụrịrị ịhapụ Octoparse 6. 2 mbipute. A na-enye ego ọhụụ na-akwụ ụgwọ n'efu na weebụ. Mpempe akwụkwọ a wepụtara ọhụrụ na-enye gị ohere weghachite data site na Ịntanetị n'ime tebụl ahaziri.
Iji jiri ọnọdụ okirikiri nke Octoparse, kpochapụ URL ahụ na ibe weebụ ịchọrọ iwepu. Pịa bọtịnụ "Smart" ma lelee ka akwụkwọ ahụ na-aghọzi tebụl edoziri.
Data scraped site na Octoparse web scraping software na-ebupụ gaa:
Iji mbupụ data site na iji Octoparse API, ị ga-enweta akaụntụ ọkachamara na weghachite data sitere na ihe karịrị otu ọrụ na-agba n'ime igwe ojii. Ihe ị ga - eme bụ ịnweta akara aka site na ịzụrụ aha njirimara na paswọọdụ gị na igbe ọchụchọ.
Site na Octoparse, ị nwere ike wepu data site na tebụl HTML ma wepụ data n'ime ihe dị iche iche nke otu.
A ga-ebufe data gafere n'ime nchekwa data MySQL ma ọ bụ SqlServer.
Ngwá ọrụ nchịkọta weebụ a na-enye ndị nwere njedebe nnwere onwe free. Ihe ndị a gụnyere:
Nkwupụta mgbe niile
Ngbanwe IP nke akpaaka
Octoparse bụ software nchịkọta weebụ kachasị elu nke na-ewepụta data site na ibe weebụ na saịtị. Site na Octoparse, ịnwere ike nweta data gị site na iji nbudata na ígwé ojii ma ọ bụ saịtị nchapu na igwefonu gị.Ibudata ma wụnye Octoparse na PC gị iji wepu ebe nrụọrụ netwọk, akwụkwọ ndekọ aha, na ọkwa ọrụ.